Siyaasadda Qarsoonnimada - Baaskiilka
Qoraalka la soo jeediyay: Ciwaanka websaydkayagu waa: https://bikehike.org.
Qoraalka la soo jeediyay: Marka booqdayaashu ay ka tagaan faallooyinka bogga aan soo uruurino xogta ku qoran foomka faallooyinka, iyo sidoo kale cinwaanka IP booqdaha iyo wakiilka isticmaalaha browser si ay u caawiyaan spam ogaanshaha.
Qoraalka la soo jeediyay: Haddii aad sawirrada ku dhejiso bogga internetka, waa inaad ka fogaataa inaad ku dhejiso sawirrada xogta meesha ku jirta (GPS) oo lagu daray. Dadka booqanaya bogga internetka waxay soo dejin karaan oo soo saari karaan xogta goobaha laga soo galo bogagga.
Qoraalka la soo jeediyay: Haddii aad ka tagto faallo ku saabsan boggayaga, waxaad dooran kartaa inaad ku badbaadiso magacaaga, cinwaanka emailkaaga iyo bogga cookies. Kuwani waxay u yihiin fududaantaada si aanad u buuxin faahfaahintaada mar kale markaad ka tagto faallo kale. Kukiyadaas waxay sii socon doonaan hal sano.
Qoraalka la soo jeediyay: Mawduucyada boggan waxaa laga yaabaa inay ku jiraan waxyaabo ku jira (sida fiidiyo, sawirro, maqaalo, iwm.). Mawduucyada ku jira mareegaha kale waxay u dhaqmaan si sax ah sida haddii booqdaha booqday bogga kale.
Qoraalka la soo jeediyay: Haddii aad codsato dib-u-dejin sir ah, cinwaankaaga IP-ga ayaa lagu dari doonaa emaylka dib-u-dejinta.
Qoraalka la soo jeediyay: Haddii aad ka tagto faallo, faallooyinka iyo maadooyinkooda ayaa si aan rasmi ahayn loo tirtiray. Tani waa si aan u aqoonsanno oo aan u ansixino wixii faahfaahin dheeri ah halkii ay ku hayn lahaayeen safka dhexdhexaadka ah.
Qoraalka la soo jeediyay: Haddii aad koonto ku leedahay boggan, ama aad ka tagtay faallooyin, waxaad codsan kartaa inaad hesho faylka la dhoofiyay ee xogta shakhsiga ah ee aan kaa hayno adiga, oo ay ku jiraan macluumaadka aad na siisay. Waxa kale oo aad codsan kartaa in aan tirtirno macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aanu kaa hayno adiga. Tani kuma jirto wax macluumaad ah oo aan ku qasbanahay inaan ku hayno maamul, sharci, ama ujeedooyin amni.
Qoraalka la soo jeediyay: Faallooyinka booqdaha waxaa laga yaabaa in lagu hubiyo adeegga xariifinta spam automat.